Tsy nisy olona nanatrika ny fanisam-bato tao anatin’ny Lisea Rabearivelo. 683 no tokony hifidy kanefa 100 mahery no tonga nifidy.
FIFIDIANANA BORIBORINTANY II
Kara-pifidianana an-jatony no nentin’ireo olona 5 saika handeha hifidy teny Ambohimitsimbina, saingy tratra. Ao amin’ny fokontany Ampamantanana izy ireo no tokony hifidy. Efa nisy marika kely ireo kara-pifidianana, izay voalaza fa efa fantatry ny lehiben’ny Birao fandatsaham-bato. Tsy mifanaraka amin’ny karapanondro naseho ihany koa ireo.
FATY TENY ITAOSY
Lehilahy iray 55 taona nonhita faty teo Beravina Andranonahoatra Itaosy, Distrika Atsimondrano ny zoma hariva tamin'ny 5ora sy sasany hariva. Ny sefo fokontany no nampandre ny manampahefana. Tonga nanao ny fizahana ny Zandary sy ny mpitsabo avy ao Itaosy ka hita fa fahafatesana tsotra.
Roalahy no tra-tehaky ny polisin'Analamahitsy nitaona bidon miisa 38 avy nalaina tao amin'ny tokatrano iray eo Manjakaray, tamin'ny alalan'ny fianihana tamboho. Ny Zoma maraina tamin'ny 3ora no nitaoman'izy ireo izany ka tojo ny mpitandro filaminana mpanao fisafoana.
MPIASA TSY NANDRAY KARAMA
Nandritra ny 5 volana ireo mpiasa 20 eo anivon’ny Faritra Bongolava no tsy nandray karama raha ny fampitam-baovao. Mpiasa tsy raikitra (ECD) miisa 20 no isan’ny tsy nahazo ny tambim-karamany nanomboka ny volana janoary hatramin’izao, raha ny fanairana sy fitarainana nataon’izy ireo.